Toa izay mba ady tokony ho nataonareo mantsy tsy misy vita fa resy amin’ny elanelan’isa lavitra be hatrany ianareo. Tsy mahavoka amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, valan’aretina,… Dia inona izany izao no hilana anareo eo ? Ny miaro seza aloha dia tompony ianareo, saingy leom-boanana tamin’ny nafitsoky ry Jean kely ny Gasy ry Jean ka izay aloha no mampangina azy a! Tsaronao ery ry Jean ny fihebohebonareo tamin’ilay fivorian’ny Frankofonia hoe miasa ho anao rafanja, saingy nahoana no tsy haseho amin’izay izany izao e ? Voaporofo hatrany ny petatokonareo, ka aza diso fandray ka hihevitra fa efa malemy araka ny hevitrareo ny vahoaka tsy mandady harona. Ny biby hanaikitra tsy mba mampiomana sy mierongerona tahaka ny adin’ny kanosa ataonareo, ka aza diso fihevitra e !